Izay tia ny teniny, tia ny tanindrazany...
Naseho ny : 22 jona 2022
Ny fitiavako ny tanindrazako, mamelona ny ambom-pom-pirenena. Ao anatin'ny iray volan'ny teny malagasy isika amin'ity volana jona ity. Tanjona ny hanentanana ny rehetra mba hanaja ny fitsipika amin'ny fampiasana ny teny malagasy na an-tsoratra na am-bava. Ny teny dia manan-danja ary masina ; isika malagasy dia manana fiteny maro. Ny tanindrazana dia ilay toerana ivezivezen'ny teny hampiasain'ireo olona miresaka, noho izany dia mifamatotra ny teny sy ny tanindrazana. Ny teny dia mihaina : miforona, mivelona, miova, maty.
Ny lafiny ara-pahasalamana manoloana ny tontolo miandry ny renim-pianakaviana
Naseho ny : 15 jona 2022
Amin'izao fotoana izao dia efa misy ireo tambavy nohatsaraina ary nitondra fahasalamana ho an'ny rehetra na ilay atao hoe "RTA". Raha isika no mamaritra ny fatran'ny tambavy hampiasaintsika fa tsy miainga amin'ny fikarohana eto aloha dia mbola manao dokotera-tena ianao izay. Mba hanamorana ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny fahasalamana dia entanina ny renim-pianakaviana mba hanatona ny mpitsabo akaiky azy... Fandaharana "Amperala Miary" vokarina eto amin'ny RDB.
Tontolo manao ahoana no miandry ny reny...
Naseho ny : 1 jona 2022
Ny tontolo misy ny vehivavy reny ankehitry dia feno rotoroto sy ahiahy eo koa ny fisedrana ny fanatontoloana. Ny tontolon'izy ireo dia feno rentirenty sy fahasahiranana. Na eo aza iretsy voalaza iretsy dia tokony tsy hanadino loatra ny tenany ny vehivavy : ara-sakafo, ny fikarakarana vatana. Ilaina ny mifanatona, tsy mandeha irery. Mila mifankahazo tsara ny olona lahy sy ny vavy. Tsy hakivy dia tokony hahay hijery lafintsara foana isika. Itoeran'adidy lehibe ny vehivavy ka tokony hahery amin'ny famolavolana ny toe-tsain'ny ankohonana. Mila tohanana ny reny : Fifanampiana amin'ny raharaha ao an-trano, eo amin'ny fanabeazana ny taranaka ka mandrisika ny rehetra hitady ny fomba rehetra ary hiomana amin'ny fikarohana zavatra maromaro...
Ny tokantrano sy ny fahasalamana
Naseho ny : 25 mey 2022
♦ Tsy tokony hiroso amin'ny fanambadiana raha mbola tsy nahavita ny fifampizahan-toetra, izay dingam-piainana mankany amin'ny maha olon-dehibe. Iaino ny dingam-piainana ankehitriny fa homano ny ho avy... ♦ Vitsy ny mpiasan'ny fahasalamana mazoto hiasa any ambanivohitra noho ny tsy fahampian'ireo foto-drafitr'asa ara-tsosialy ilainy ka izay no antony mandrisika ny olona hanao dokotera tena ; ohatra ny sekoly hampianaran'izy ireo ny zanany na ny resaka herinaratra... ♦ Ho fitsinjovana ny fahasalamana dia tokony handanjalanja ny zavatra hampidirina am-bava ny olona indrindra ireo nandalo teny amin'ny mpitsabo nentim-paharazana ; tsara kokoa ny manao fitiliana eny amin'ny mpitsabo matihanina.... Fandaharana "Ampela Miary".
Pejy 1 amin'ny 23